DEG DEG Lataliyihii Madaxweyne Farmaajo oo diyaarada turkish airweys ku dhex geeriyooday - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG Lataliyihii Madaxweyne Farmaajo oo diyaarada turkish airweys ku dhex geeriyooday
DEG DEG Lataliyihii Madaxweyne Farmaajo oo diyaarada turkish airweys ku dhex geeriyooday
Waxaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan ku geeriyooday Lataliyihii madaxweyne farmaajo dhinaca badaha uqaabilsanaa.
Marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanaa dalka Turkigana xaaladiisana lala tacaalayey ayaa ugu dambeyn ku xijaabtay Xamar markii la keenay,isagoo saarnaa diyaarada turkish airweys gudaheeda.
Injineer Saalixi ayaa ka mid ahaa khubarada Soomaaliya dhexda uxirtay kiiska badda ee Kenya nagala dhaxeysay taas oo dacwadeeda Maxkamada ICJ dhageysatay go’aanka udambeeyana la sugayo.
Marxuum Maxamed Cumar Saalixi ayaa ku dhashay deegaan hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gedo 1952-kii,isagoo hadda ahaa 69 sano jir,waxa aabihiis Cumar Saalixika tirsanaa ururkii leegada S.Y.L.
Ka hor inta uusan Madaxweyne Farmaajo unoqon lataliyaha dhinaca Badaha waxa uu Injineer Maxamed Cumar Saalixi soo noqday sargaal kasoo shaqeeyey Xafiiska Qaramada Midoobeey qeybteeda bini’aadanimada oo xarun ku lahaa Magaalada Baardheere.
Dawladii TNG-da Ee Madaxweynaha ka ahaa C/qaasim Salaad Xasan ayaa waxa Injineer Maxamed Cumar Saalixi ka noqday Wasiir kuxigeenkii Beeraha Soomaaliya.
Labadii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ka mid ahaa marxuum Saalixi shakhsiyaadka ugu aqoonta badan ee Soomaaliya ku metalayey Kiiska Badda Ee nagala dhaxeyso Kenya isagoo ahaa maskaxdii ka dambeysay soo gudbinta macluumaadyo kusaabsan Qariiradaha Badda,Qaabka Dooda loola galay Kenya iyo sax ahaanshyaha in Badda Soomaaliya leedahay uu qeyb ka ahaa dadkii qoray warbixinada.
Sidoo kale xilal kala duwan ayuu Saalixi kasoo qabtay Soomaaliya,isagoo Lataliye usoo noqday Dawladii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayo.
Mas’uuliyiin katirsan Dawlada iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida Injineer Maxamed Cumar Saalixi iyagoo alle uga baryey in janadiisa ku arsaaqo.